samedi, 07 septembre 2019 20:59
Iavoloha: Nihaona tamin'ny filoham-pirenena, ny masoivoho, ny fiarahamonim-pirenena ny Papa
Masoivoho vahiny, mpikambana tao anatin'ny andrimpan-jakana samihafa, mpanao politika, mpitondra fivavahana, fikambanana isan-tokony, fiarahamonim-pirenena sivily sy miaramila maro no nasain'ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina hiaona tamin'ny Papa Fransoa io marainan'ny asabotsy 07 septambra io, teny amin'ny Lapa-panjakana Iavoloha.
Nisy moa ny hazo niarahan'ny roa tonta namboly ho fahatsiarovana izao fitsidihana ataon'ny Papa eto Madagasikara izao.
samedi, 07 septembre 2019 19:09
Cathédrale Andohalo: Namangy ny fasan'i Victoire Rasoamanarivo Olo-tsambatra ny Papa
Taorian'ny fihaonan'ny Papa Fransoa tamin'ireo Eveka Katolika teny Andohalo, dia nitsidika ary nitondra am-bavaka an'i Victoire Rasoamanarivo Olo-tsambatra i Papa Fransoa.
Taorian'izay dia nihazo an'i Soamandrakizay izy, hiaona amin'ireo tanora analin-kisa, hanao alim-bavaka.
Tomefy olona marobe hatrany eny amin'ny toerana alehany, sy izay andalovany.
samedi, 07 septembre 2019 18:47
Cathédrale Andohalo: Tonga niarahaba ny Papa Fransoa ny Filoha teo aloha Ravalomanana mivady
Taorian'ny fihaonan'ny Papa Fransoa tamin'ireo Eveka Katolika teny Andohalo, dia tonga niarahaba ny Papa Fransoa ny Filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy ny Ben'ny Tanànan'Antananarivo renivohitra Lalao Ravalomanana.
Nisy fifanolorana fahatsiarovana teo amin'ny roa tonta.
samedi, 07 septembre 2019 18:45
Cathédrale Andohalo: Tonga niarahaba ny Papa ny Filoha Anglikanina sy Loteranina
Taorian'ny fihaonan'ny Papa Fransoa tamin'ireo Eveka Katolika teny Andohalo, dia tonga niarahaba sy nidinika fohy niaraka tamin'ny Papa Fransoa ny Filohan'ny Fiangonana Anglikanina EEM, Mgr Ranarivelo Samoela Jaona sy ny Filohan'ny Fiangonana Loterana Malagasy ny Pastora Dr. Rakotonirina David.
samedi, 07 septembre 2019 16:26
Cathédrale Andohalo: Fihaonana tamin'ireo Eveka
Nanazava ny fitondran-tenan'ny Mpitondra Fiangonana ny Papa, ny hifandraisan'ny Eveka manokana amin'ireo Pretra sy Reliziozy eo ambany fiadidian'izy ireo. Ny fijerena akaiky ny tena mahazo ny vahoaka ho entina, ny tsy fitsikombakombana amin'ny zavatra tsy mety ataon'ny fitondram-panjakana raha misy izany, ny fahanginana manoloana ny tsy rariny.
Entitra ny Papa amin'ny tokony anakekezana ny vahoaka sy ny Kristianina. Hijerena ireo mampahory azy. Noantitranteriny ny mahazava-dehibe ny fanofanana ireo miroso amin'ny fanompoana an'Andriamanitra, ny firosoana ho Relijiozy, Diakra ary Pretra.
samedi, 07 septembre 2019 15:39
Cathédrale Andohalo Rencontre du Pape avec les Évêques de Madagascar
samedi, 07 septembre 2019 12:55
Moine sy Karmelita: Maninona no mitoka-monina, inona no asany?
Eo anivon'ny Fiangonana Katolika, dia misy ireo mopera, frera, masera mitoka-monina, anisan'izy ireo ry masera Karmelita notsidihan'i Papa Fransoa teny Ampasanimalo anio sabotsy 07 septambra 2019.
Inona tokoa moa izy ireo, nahoana no mitoka-monina ary manao inona?
Maro ny fikambanan-drelijiozy lahy na vavy izay manokan-tena ho an'Andriamanitra, ary nisafidy ny hitoka-monina hiala tanteraka amin'ny fiainan'ny fiaraha-monina an-davanandro.
Tsy miara-toerana ny lahy sy ny vavy, samy manana ny kongregasiona misy azy. Toa an'ny Carmes ny lehilahy ary Carmelites ny an'ny vehivavy, izay ry Thérèse d'Avila no namorona azy. Misy koa ny Bénédictins, sy ny Bénédictines, izay Saint Benoit no nanangana azy.
samedi, 07 septembre 2019 12:49
Karmelita : Najanon'i Papa ny toriteny efa nomaniny
Nihaona tamin'ireo masera mitoka-monina ao amin'ny karmelita Ampasanimalo ny Papa Fransoa.
Efa nanomana toriteny izy fa araky ny nambarany, dia ho zaraina aminareo izany toriteny izany fa aleo ho izy ny foko no hiteny.
Notantarainy ny fiainan'ity masera tanora niharitra nanolo tena nikarakara masera be kizitina antitra.
Ny fanetren-tena sy ny fanekena hoy izy no nahavitany ny iraka nampanaovina azy. Ary nahitany an'Andriamanitra.
Tantaran'ny Masimbava Terezy io hoy izy, Terezy izay miaro sy manampy azy ihany koa, satria izy efa antitra nefa eo hatrany Masimbavy Terezy mitantana azy ahita an'Andriamanitra.
Amin'ny fanampiana ny madinika, ny osa hoy i Papa Fransoa no ahitana an'Andriamanitra. Aza mitady zavatra goavana hoy izy, fa manaova ny asa faran'izay tsotra, fanetren-tena farany izay madinika dia ahita an'Andriamanitra.
samedi, 07 septembre 2019 10:28
Madagasikara sy Vatican: 52 taona nifandraisana ara-diplaomatika
Ny taona 2017 no nankalazana ny faha-50 taonan'ny fifandraisana diplomatika teo amin'i Madagasikara sy Vatican.
Amin’ny maha filoham-panjakana ny Papa Ray Masina Fransoa dia hihaona amin’ireo filohan’ny andrim-panjakana, ny fiaraha-monim-pirenena ary ireo masoivoho eto amintsika eny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha ny tenany ny marainan’ity sabotsy 7 septambra 2019 ity.
Aorian’izay dia hitsidika an-dry masera karmelita eo Ampasanimalo i Papa Fransoa, sady mamarana ny fandaharam-potoanany ny tapakandro maraina.
Ny tolakandro dia hisy ny fihaonany amin'ireo Evekan'i Madagasikara eny amin'ny Katedraly Andohalo, hiarahaba azy eny koa ny FFKM. Aorian'izay dia hitsidika ny Chapelle misy ny fasan'ny Olontsambatra Victoire Rasoamanarivo izy.
Hamarana ny fandaharam-potoanany anio ny fiarahany manao alim-bavaka miaraka amin'ny Tanora eny Soamandrakizay.
samedi, 07 septembre 2019 10:23